Explainer ဗွီဒီယိုထုတ်လုပ်မှုသိကောင်းစရာများနှင့်အမျိုးအစားများ | Martech Zone
ကြာသပတေးနေ့, သြဂုတ်လ 20, 2015 အင်္ဂါနေ့, အောက်တိုဘာလ 6, 2015 Douglas Karr
ကျွန်တော်တို့ဟာအခြားတစ်ယောက်ရဲ့အလယ်မှာရှိတယ် ရှင်းပြဗီဒီယိုထုတ်လုပ်မှု ငါဒီရေးသားနေတာနှင့်ထံမှမှအံ့သြဖွယ်ရလဒ်များကိုမြင်ကြပြီအဖြစ် ငါတို့ထုတ်လုပ်ပြီးပြီ၊ scripted သို့မဟုတ်မျှဝေလိုက်သောဗွီဒီယိုများ။ ၄ င်းသည်စေ့စပ်ညှိနှိုင်းမှုနှင့်စကားဝိုင်းများကိုမောင်းနှင်သည့်ဗီဒီယိုများဖန်တီးရန်ခိုင်မာသောဖြစ်စဉ်ကိုထောက်ပံ့ပေးသောရှင်းပြသောဗွီဒီယိုများကိုဖန်တီးရန်အလွန်အမင်းအသေးစိတ်အချက်အလက်များဖြစ်သည်။
သင်၏ပြောင်းလဲနှုန်းကိုတိုးမြှင့်စေမည့်ရှင်းပြသောဗွီဒီယိုတစ်ခုကိုသင်မည်သို့ဖန်တီးသနည်း။ သင့်ကိုကူညီဖို့ငါပြီးပြည့်စုံတဲ့ရှင်းပြတဲ့ဗီဒီယိုဖန်တီးမှုလုပ်ငန်းစဉ်ကိုဖြိုခွဲနိုင်တဲ့ infographic တစ်ခုဖန်တီးခဲ့တယ်။ နီးလ် Patel က, Quicksprout.
ကျနော်တို့တစ် ဦး မျှဝေပါတယ် ရှင်းပြဗီဒီယိုအပေါ်ရှင်းပြဗီဒီယို သင်ထွက်စစ်ဆေးချင်ပေလိမ့်မည်။ ငါတို့သည်အတော်လေးအနည်းငယ်မျှဝေပါတယ် ရှင်းပြဗီဒီယိုဥပမာများ, Quicksprout မှဒီ infographic ပို။ ပင်ရှိပါတယ်ပေမယ့်!
နောက်လမ်းညွှန်တစ်ခုကိုကြည့်ချင်တယ်ဆိုရင် Explainer ဗီဒီယိုထုတ်လုပ်မှု, McCoy Productions ထွက်စစ်ဆေးပါ Explainer ဗီဒီယိုထုတ်လုပ်မှုအပေါ်လမ်းညွှန်.
ငါဒီ infographic အတွက်လုပ်ပေးမယ့်တစ်ခုတည်းသောတိုးတက်မှုကတော့ ရှင်းပြဗီဒီယိုထုတ်လုပ်မှု သတ်မှတ်အဆင့်များ။ အဆင့် ၂ သည်ဇာတ်ညွှန်းဖြစ်ပြီးအဆင့် ၃ သည်ဗီဒီယိုကိုခေါင်းပေါ်တွင်တင်ထားသည်။ ငါသဘောမတူ ... နှင့်မြင်ကွင်းတစ်ခုစီ၏ကြမ်းတမ်းသောပုံဆွဲခြင်းကိုသင့်လျော်သောစာလုံးဖြင့်ရေးသားခြင်းကိုပြုလုပ်လိမ့်မည်။ ထို့နောက်နံရံသို့မဟုတ်စားပွဲပေါ်တင်လိုက်ခြင်း၊ ရှင်းလင်းပြတ်သားသောဗီဒီယို၏ရိုးရှင်းမှုနှင့်အရှိန်အဟုန်ကိုရှင်းလင်းစွာဖော်ပြသည်။ ကျွန်တော်နှင့်လုပ်ခဲ့သောဗွီဒီယိုဒီဇိုင်နာတိုင်းသည်၎င်းကိုထောက်ပံ့ပေးခဲ့ပြီး၎င်းသည်ထုတ်လုပ်မှုအချိန်များစွာသက်သာစေသည်။
ကျွန်ုပ်တို့တီထွင်ထားသောဗွီဒီယိုကိုကျွန်ုပ်တို့ရှေ့နှင့်နောက်လှမ်းရွှေ့ခဲ့ပါကအသုံးမပြုရသေးသောမြင်ကွင်းများကို animating သို့မဟုတ်ဖြည့်စွက်ရန်လိုအပ်သည့်မြင်ကွင်းများထုတ်လုပ်ခြင်းကိုအချိန်ဖြုန်းခဲ့ရသည်။ လျှောက်လွှာတစ်ခု၏ mockup များသည်ဖွံ့ဖြိုးမှုအချိန်ကိုသက်သာစေသကဲ့သို့၊ စတူဒီယို mockup များသည်သင်၏ရှင်းပြစက်ဗွီဒီယိုထုတ်လုပ်မှုတွင်အားများစွာသက်သာစေသည်။
Tags: ရှင်းပြ video ကိုဖန်တီးပါရှင်းပြဗီဒီယိုရှင်းပြဗီဒီယိုထုတ်လုပ်မှု
အကြောင်းအရာတစ်ခုစီ၌သင်ရှိသင့်သည့် Element ၄ ခု